Madaafiic ayaa la sheegay inay ku dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde… – Hagaag.com
Madaafiic ayaa la sheegay inay ku dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde…
Wararkii u dambeeyay ee xaalada magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in madaafiic ay ku dhacday garoonka diyaaradaha iyadoo mid ka mid ah madaafiicdana ay ku dhacday afaafka hore ee garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho.
Lama oga khasaaraha ka dhashay madaafiicda ku dhacday garoonka hase yeeshee waxa ay wararku sheegayaan inuu saameyn ku yeeshay duulimaadyadii diyaaradaha ka duulayay iyo kuwa ka soo dagayay, iyadoo uu hakad ku yimid duulimaadyada.
Dhinaca kale waxaa qabowday rasaas lagu ridayay shacab ay horkacayeen qaar kamid ah musharaxiinta madaxweynaha kadib markii ay ku soo dhowaadeen isgoyska lambar 4 halkaasoo ciidamo ku sugnaa ay rasaas ku kala eryeen.
Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre oo ka mid ah musharaxiinta ayaa ka mid ahaa dadkii banaanbaxa dhigayay waxayna socod ka soo bilaabeen hotel Jazeera.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah musharaxiinta ka qeybgalay banaanbaxan ayaa waxaa uu ku soo qoray boggiisa Facebook in ciidamada ay rasaas ku fureen dadkii sida nabada ah u banaanbaxayay.
“Maleeshiyaadka xabadda ooda uga qaaday shacabka iyo hogaamiyayaalka sida nabadda ah u mudaaharaadayey ee ka amar qaataan kali taliska xilligiisa dhamaaday ee ina Farmaajo danbiga ayey isku sii badinayaan. Way dhowdahay maalintii marinkooda la marin lahaa. Reer Muqdisho waxaan leeyahay dhiigya cabka waad aragteen, waxaa idiin dhiman in aad iska dhicisaan.”
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa xiran inta badan wadooyinka waaweyn iyadoo lagu arkayo ciidamo wata gaadiidka dagaalka.